Mac Book ၁လုံးဝယ်တော့မယ်ဆို ဘယ်အချက်တွေကိုသိထားဖို့လိုမလဲ? - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
Mac Book ၁လုံးဝယ်တော့မယ်ဆို ဘယ်အချက်တွေကိုသိထားဖို့လိုမလဲ?0886
Usman Ghani September 29, 2020 10:46 am October 5, 2020
Mac Book တွေဟာ ပုံမှန်လက်ပ်တော့တွေထက် Function ပေါင်းများစွာပါရှိပြီးတော့ Android တွေနဲ့လဲစျေးနှုန်းကွာဟပါတယ်။ ပြီးတော့ Mac Book တွေ သူ့ Series အလိုက် Mac book air နဲ့ Mac Book Pro ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်။ သင်ဟာ Mac Book တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာအတွက် သုံးဖို့လဲဆိုတာသေချာသိရှိနားလည်ထားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Mac Book Air မှာဆိုရင် လုပ်ငန်းသုံးအတွက် အလွန်အဆင်ပြေပြီးဂိမ်းတွေဆော့ဖို့အတွက်တော့ အဆင်မပြေပါဖူး။ ကိုယ်က အစုံလုပ်ဖို့အတွက် သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Mac book pro ကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ပြီးတော့ စျေးနှုန်းမှာလည်း Mac Book Pro က Mac Book Air ထက်ပိုစျေးကြီးပါတယ်။ ကဲအဲ့တာဆိုရင် Mac Book တစ်လုံး ဝယ်ရင် ဘယ်အချက်တွေကြည့်ပြီး ဝယ်ရမလဲဆိုတာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Mac Book တွေကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Shop.com.mm မှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။
Buy your favorite products in this year’s biggest sale with best deals and disocunts in this 10.10 sale only from shop.com.mm